Opto electronic (or) Photo electronic devices (အလင်းဆိုင်ရာအီလက်ထရောနစ်ပစည်းများ) [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ > Opto electronic (or) Photo electronic devices (အလင်းဆိုင်ရာအီလက်ထရောနစ်ပစည်းများ)
View Full Version : Opto electronic (or) Photo electronic devices (အလင်းဆိုင်ရာအီလက်ထရောနစ်ပစည်းများ)
Opto electronic devices or Photo electronic devices (အလင်းဆိုင်ရာအီလက်ထရောနစ်ပစည်းများ)...ဒီအလင်းဆိုင်ရာအီလက်ထရောနစ်ကို Optoelectronic လိုခေါ်သလို Photoelectronic ဟုလည်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်......ကျနော်ဒီခေါင်းစဉ်ကို
အီလက်ထရောနစ်သမားများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကျနော်သင်တန်းတစ်ခုမှာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်သလို ကျနော်လည်းသူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာ ရေစက်ပါခဲ့ပါတယ်....ဒါကြောင့် ဒီခေါင်းစဉ်ကို တင်မယ်လိုဆုံးဖြတ်ပြီး ဆင်တူခေါင်းစဉ်များရှိသလားလို အရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်ပြီးမှ တင်သင့်တယ်လိုယူဆိုပြီးတင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ကနဦးပြောလိုပါတယ်...လျပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာမှာတော့ lighting engineer ဆိုပြီး တင်ထားတာတွေ့ပါလတယ်....အဲဒီမှာတော့ မီးဆင်ခြင်းများ မီးလုံးများ ..candle power ...lux..illumination အကြောင်းများကို ဆွေးနွေးထားတာတွေ့ရပါတယ်...ကျနော်က ECသမားဖြစ်တဲ့အတွက် Electronic ပိုင်းကို ဦးစားပေး ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.......
ဒီအပိုင်းမှာလည်းကိုဇင်မောင်လိုချင်တဲ့ စစ်ဘက်သုံး optical ဆိုင်ရာများလည်း အကျုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်..........
opto electronic devices ကို ဘယ်လိုအသုံးတာလဲလိုမေးလာမှာကိုအရင်ဆုံးရှင်းလိုပါတယ်.......ကျနော်တို့ အိမ်သုံးရုံးသုံး အီလက်ထရောနစ်ပစည်းတွေမှာသုံးတဲ့ဆားကစ်များသည် high voltage နဲ့ low voltage ကို တွဲသုံးကြရပါတယ်...အဲဒီမှာကြားခံထားတဲ့ပစည်းများဖြစ်သော electronic switches အဖြစ်အသုံးကြတဲ့ control rectifier ... triac ..shokey diode အစရှိသော electronic devices များပျက်စီးသောအခါမှာ high voltage သည် low voltage control circuit အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသဖြင့် ဆားကစ်များလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စေပါတယ်....ထိုအတွက် နောက်ပိုင်းမှာထိုသို့ပျက်စီးမှုများကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် high voltage နှင့် low voltage တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုကိုရှောင်ရှားပြီး အလင်းရောင်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်....၄င်းအသုံးပြုခြင်းများမှာများပြားလွန်းသည့်အတွက် ဥပမာတစ်ခုသာပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်............တစ်ခုသတိပြုစရာအဖြစ်...ကျနော်တို့လုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း အချို့photoelectronic
devices များနှင့်ဆားကစ်များကိုဖြုတ်ရာတွင် အလင်းရောင်ရိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန် စကူတိတ်များကိုကပ်ပြီးမှ ဖြုတ်တပ်ခြင်းပြုလုပ်ရကြောင်းကိုသိရှိရပါတယ်....ကျနော်တို့အလင်းပတ်သတ်ပြီး electronic အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှု သုံးမျိုးရရှိပါတယ်......၄င်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်-
(၁)အလင်းဗို့အားအကျိုးသက်ရောက်မှု (photovoltaic effect)
(၂)အလင်းလျှပ်ကူးအကျိုးသက်ရောင်မှု (photo conductive effect)
(၃)အလင်းထုတ်လွှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု (photo emission effect)
အလင်းဗို့အားအကျိုးသက်ေ၇ာက်မှုဆိုသည်မှာ သထုတစ်ခု၏ဆုံဆက်(junction)တစ်ခုပေါ်သို့ အလင်းကျရောက်သောအခါ ဗို့အားတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်...photocells သည် အလင်းဗို့အားအကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်သောအရာများဖြစ်သည်...ဥပမာ ဆယ်လီနီယမ်အလင်းဗို့အားဆဲလ်
အလင်းလျှပ်ကူးအကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုသည်မှာ အလင်းအင်အားအနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး ၄င်းကိုဖြတ်စီးသောလျှပ်စီးကြောင်း အနည်းအများဖြစ်စေခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အလင်းလျှပ်ကူးဆဲလ်များသည် အနည်းကျဉ်းသော အလင်းရောင်ကိုရရုံမျှခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်...ထိုသို့ sensitivity ကောင်းသော အလင်းလျှပ်ကူးဆဲလ်များကို အသုံးပြုလိုပါက special cooling apparatus များအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်....ထိုဆဲလ်များသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်ကိုကောင်းစွာအာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် ကျယ်ပြန်စွာအသုံးပြုကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်.....
အလင်းလွင့်ထုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုသည်မှာသထုမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အလင်းကျရောက်သည့်အခါမှာ ၄င်းမျက်နှာပြင်မှ အီလက်ထရွန်များထွက်လာခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်......
အလင်းဗို့အားဆဲလ်များအား ခြောက်သွေ့သောသထုများဖြင့်ပြုလုပ်ထာသောကြောင့် သေးငယ်ပေါ့ပါးပြီးအကြမ်းခံနိုင်ပြီးသက်တမ်းရှည်ကြာစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် အလင်းဗို့အားဆဲလ်ပေါ်သို့
အလင်းကျရောက်လာသည့်အခါ ကျရောက်လာသည့်အလင်းစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သို့ပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်..ပြင်ပတွင်လည်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးsolar များကိုအလင်းဗို့အားဆဲလ်အဖြစ်မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်...အလင်းဗို့အားဆဲလ်အဖြစ်ယခုအခါ ဆယ်လီနီယမ်သထု အဓိကအသုံးပြုကြောင်းတွေ့ရှိ၇ပါသည်။ပထမဆုံးပေါ်ခဲ့သော အလင်းဗို့အားဆဲလ်မှာ ဘယ်ကွာရယ်ဆဲလ်ဖြစ်ပြီး ထိုဆဲလ်မှာ သတုနှင့်လျှပ်လိုက်ရည်တို့ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားသောဆဲလ်အစိုအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ပထမဆုံးသောဆယ်လီနီယမ်သထုဆဲလ်ကို ၁၈၇၇ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်မှ အဒမ်နှင့်ဒေးမှ စတင်တီထွင်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။၁၈၉၃ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသား စီအီဖီလစ်မှ ထိုထက်ပိုကောင်းသော ဆယ်လီနီယမ်ကို ထပ်မံပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။၁၉၂၀တွင်စတောကီနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှ Cuprous oxide copper cells များကိုတီထွင်ခဲ့ပါသည်။၁၉၃၀ပြည့်နှစ်ရောက်မှ မူလဆယ်လီနီယမ်ဆဲလ်များကို စနစ်တကျပြုပြင်ပြီး အကောင်းဆုံးသောအလင်းဗို့အားဆဲလ်များကို တီထွင်လာနိုင်ခဲ့ပါသည်။
အလင်းလျှပ်ကူးပစည်းများသည် ၄င်း၏ PN ဆုံဆက်ပေါ်သို့ အလင်းရောင်ကျရောက်မှသာ လျှပ်စီးကူးမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးအလင်းရောင်ပျောက်ကွယ်သွားပါက လျှပ်ကူးမှုကိုဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Barrier အလွှာပါသော ဆယ်လီနီယမ်ဆဲလ်များ....၄င်းကိုထုတ်လုပ်ပုံမှာ ပထမဦးစွာ သံ(သို့)အလူမီနီယမ် အောက်ခံပြားပေါ်တွင် ဆယ်လီနီယမ်ကိုအရည်ဖော်ပြီးလောင်းပေးရမည်။ အရည်ပျော်နေသောဆယ်လီနီယမ်မှ ပုံဆောင်ခဲပုံစံဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် ထပ်မံပြုလုပ်ပေးပါ...ဆယ်လီနီယမ်အပေါ်မှ လျှပ်ငုတ်ကိုဖန်တီးပေးရမည်။ ထိုသို့ဖန်တီးသောအခါ အမှုန့်ပက်ဖြန်းနည်းကိုဖြစ်စေ အငွေ့ပြန့်နည်းကိုဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်လေသည်။ထိုအလွာပါးလေးကိုလုံလောက်သော အတိုင်းအတာရသည်အထိ တည်ဆောက်ပေးလိုက်သောအခါ ထိုအလွှာသည်အလင်းရောင်ဖောက်ထွင်းနိုင်သောအလွှာဖြစ်လာသည်။ လျှပ်ငုတ်များအဖြစ် ရွှေ(သို့)ပလက်တီနမ်ကို အသုံးပြုကြပါသည်။ထိုသို့ရရှိသောဆဲလ်များကို အလင်းရောင်ဖောက်ဝင်နိုင်သောချိပ်(သို့) ပလပ်စတစ်တစ်မျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုဖုံးအုပ်နိုင်ပါသည်။
(အရှေ့ပိုင်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သောအကြောင်းအရာများကို ဦးကိုကိုလေးစာအုပ်ကို ကိုးကားပြီး အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်)
ကျနော်တို့၏ ယနေခတ်တွင် အလင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကောင်းကျိုးများကို အသုံးပြုပြီး သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးတွင်အသုံးချနေကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်...ဆေးကုသမှုနယ်ပယ်တွင် ကင်ဆာအတွက်ဓါတ်ကင်ခြင်း၊ စစ်ဘက်များတွင် လေဆာအသုံးပြု အကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်းများ၊ ညကြည့်ကိရိယာများအတွက်အသုံဲးဲပြုခြင်းများ၊ အရပ်ဖက်တွက် အလင်းရောင်အခြေပြုဆားကစ်ပတ်လမ်းများ(ဥပမာအလင်းရောင်မရှိသည့်အခါမီးစက်နှိုးသွားပြီး မီးပြန်လင်းခြင်းများ၊ လူမှတံခါးရှေ့ရပ်သည့်အခါ တံခါးပွင့်သွားသည့်ဆားကစ်များ)အတွက်အသုံးပြုကြလာသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်........အထက်ပါရေးသားချက်များသည် opto electronic devices အတွက် နိဒါန်းပျိုးရေးသားချက်ဖြစ်ပါသည်။ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးလိုသူများကိုလည်း ၄င်းနှင့်ပတ်သတ်သည့်အချက်များကိုလေ့လာပြီး ဆွေးနွေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်များ....
ပညာရပ်ဆိုင်ရာအချက်များရရှိဖိုထက် ၄င်းတို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံအသစ်များရရှိဖို့က ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်
opto electronic devices ကို ဘယ်လိုအသုံးတာလဲလိုမေးလာမှာကိုအရင်ဆုံးရှင်းလိုပါတယ်.......ကျနော်တို့ အိမ်သုံးရုံးသုံး အီလက်ထရောနစ်ပစည်းတွေမှာသုံးတဲ့ဆားကစ်များသည် high voltage နဲ့ low voltage ကို တွဲသုံးကြရပါတယ်...အဲဒီမှာကြားခံထားတဲ့ပစည်းများဖြစ်သော electronic switches အဖြစ်အသုံးကြတဲ့ control rectifier ... triac ..shokey diode အစရှိသော electronic devices များပျက်စီးသောအခါမှာ high voltage သည် low voltage control circuit အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသဖြင့် ဆားကစ်များလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စေပါတယ်....ထိုအတွက် နောက်ပိုင်းမှာထိုသို့ပျက်စီးမှုများကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် high voltage နှင့် low voltage တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုကိုရှောင်ရှားပြီး အလင်းရောင်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်....၄င်းအသုံးပြုခြင်းများမှာများပြားလွန်းသည့်အတွက် ဥပမာတစ်ခုသာပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်
အေ၇ာလည်း အော်တိုကော်ပလာဆိုတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့အိုင်ဆိုလိတ်ဖြစ်အောင်သုံးတာ တွေ့ဖူးတယ်။
ဗို့အားမြင့်အပိုင်းနဲ့ ဗို့အားနိမ့်တဲ့အပိုင်းကြားမှာ လျှပ်တားနိုင်စွမ်းတော်တော်များတယ်။
အသုံးချတော့မယ်ဆိုလျှင် အချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုတော့ ကွန်ယက်ပေါ်က ရှာဖွေဆွဲယူရတာပါပဲ။
ဆရာဝင်းထက်ဝင်းရဲ့ စာအုပ်တွေမှာလည်း LDR နဲ့ LED ကို ကိုယ်တိုင်ပူးတွဲကာ ပြင်ပအလင်းရောင်မ၀င်အောင် တိပ်နဲ့ပတ်ပြီးသုံးတဲ့ နည်းလမ်းတွေ အကြံပြုဖေါ်ပြတာတွေ့ဖူးပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ opto electronics devices ကို ကျနော်တို့ဆယ်တန်းစာကျက်သလိုပဲ light energy မှ electrical energy (သို့) electrical energy မှ light energy သို့ကူးပြောင်းပေးတဲ့ပစည်းလိုပဲ မှတ်ယူလိုက်ပါတယ် ဘယ်လိုပဲအများကြီးရေးရေးနောက်ဆုံးတော့ အနှစ်ချုပ်ကတော့ စာသားနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်
မအေရာပြောမှသတိရတော့တယ်...electronic devices စာအုပ်မှာတော့အိုင်ဆိုလေးရှင်းဗိုအားအကြောင်းကိုဒီလိုရေးထား တာတွေ့ရပါတယ်...
isolation voltage: isolation voltage of an optical coupler is maximum voltage that can be exist between the input and output terminals without dielectric breakdown occuring. Typical value are about 7500 V ac peak.
optical coupler များကို လျပ်စစ်အ၀င်အထွက်ဆားကစ်များကို ပြီးပြည့်စုံသော Isolator ဖြစ်နေစေရန်အတွက် ဒီဇိုင်းပြုစုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်..၄င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဗို့အားမြင့်ပတ်လမ်းမှဗို့အားဝင်ရောက်မှုနှင့် ဗို့အားနိမ့်နှောက်ယှက်သံများ၏အထွက်ဗို့အားဆီသို့ ၀င်ရောက်ခြင်းတို့ကြောင့် အီလက်ထရောနစ်ပစည်းများပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အော်တိုကော်ပလာသည် မတူညီသောဗို့အားအမျိုးမျိုးကူးပြောင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ အော်တိုကော်ပလာ၏တည်ဆောက်ပုံမှာ အ၀င်ဆားကစ်ပိုင်းတွင် LED အားထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပြီး အထွက်ဆားကစ်အပိုင်းတွင် phototransistor ... photodilarton ....LASCR(light activated silicon control rectifier)..phototraic ...အစရှိသော အထွက်ဆားကစ်များကို အသုံးပြုပြီး မိမိတို့လိုအပ်သလိုတည်ဆောက်အသုံးပြုကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်...အောက်တွင်ပြထားသောဆားကစ်ပုံမှာ LEDနှင့် phototransistor တို့သုံးထားသော optical coupler ပင်ဖြစ်ပါသည်.....
အေရာပြောမယ်စဉ်းစားပြီးမှ ကျန်နေ့ခဲ့လို့ ထပ်ပြောရဦးမယ် ကြည်ဖြူရေ။
ပစ္စည်းကတော့ ဒါကဒါပဲ အသုံးချချင်တဲ့သူတွေက သူတို့လိုချင်တဲ့ဖက်ဆွဲကြည့်တော့ အခေါ်အဝေါ်ကအစ ကွာခြားကုန်တာမျိုးတွေအများကြီးရှိတတ်တဲ့သဘာဝဆိုရမှာပေါ့နော်။
အော့(ပ)တိုကော်ပလာတွေကို အချို့က ဆောလစ်စတိတ် ရီလေးလို့ ခေါ်တတ်ကြတယ်။
အသုံးချစနစ်တစ်ခုမှာ လေ့လာစောင့်ကြည့်လိုတဲ့ အဖြစ်အပျက်သဘာဝတစ်ခုခုရဲ့ အနည်းငယ်သောအပြောင်းအလဲလေး၊ ထူးခြားကွာခြားချက်လေးကြောင့် လျှပ်စီးကြောင်းသေးသေးလေးထွက်ပေါ်လာစေအောင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ယနေ့ခေတ်အခါမှာ အလွန်ပဲ ပေါများလှတာ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။
အဲဒီလို အချက်ပြလျှပ်စီးရှိတာနဲ့ မရှိတာ ကွာခြားမှုမှတစ်ဆင့် အကျိုးဖြစ်အောင် နောက်လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုကို ဆင့်ကမ်းလက်လွှဲတာဝန်ထမ်းဆောင်စေနိုင်တယ်ဆိုရင် ရီလေး(ကတ်တောက်) ဆင့်ကမ်း စတဲ့နာမည်တွေနဲ့ သိမှတ်ကြပါတယ်။
ရီလေး အမျိုးမျိုးအထွေထွေကို သံလိုက်ဓါတ်အားပေါ်ထွန်းမှုမှတစ်ဆင့် လှုပ်ရှားရွေ့လျားမှု/လည်ပတ်မှု စတာတွေ ပေါ်ပေါက်စေပြီး အသုံးဝင်အောင် စေခိုင်းကြတာကများပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အ၀င်ဖက်မှာ လျှပ်စီးသေးသေးက အလင်းရောင်ကိုဖြစ်စေတယ်၊ အဲဒီအလင်းရောင်က ဖိုတိုထရန်စစ္စတာရဲ့ ဘေ့စ်ကားရင်းစီးဆင်းစေပြီး နောက်ပတ်လမ်းကို အလုပ်လုပ်စေတဲ့အခါမျိုးမှာကြတော့ လှုပ်ရှားမှုသဘော လုံးဝကင်းလွတ်သွားပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် အစိုင်အခဲ ဆောလစ် အသွင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။
နောက်ပြီးတော့ သူက လျှပ်စီးချဲ့ပေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအကျိုးရှိစေလဲဆိုတော့ လျှပ်စီးကြောင်းကြီးမားတဲ့ပတ်လမ်းတွေမှာ အဖွင့်အပိတ် ခလုပ်နေရာက မီးစားပြီးပျက်စီးတတ်လေ့တာကို ရှောင်ရှားချင်တဲ့နေရာမျိုးမှာ ဆောလစ်စတိတ်ရီလေး သုံးကြတာမျိုးရှိတတ်ကြောင်းပြောလိုတာပါ။
သူ့ကြတော့ အိုင်ဆိုလိတ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာ ပဓါနမဟုတ်တော့ပဲ၊ လျှပ်စီးချဲ့နိုင်တာရယ်၊ အချိန်တိုအတွင်း ပွင့်လိုက် ပိတ်လိုက် ကြိမ်နှုန်းမြန်ဆန်လိုတာရယ် စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရချင်လို့သုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်။